Xulka Qaranka Faransiiska oo Guul ka Gaarey R. Of Ireland iyo Germalka oo Si Sahlan ugu Soo Baxay Wareega 8da ee Euro 2016+Sawiro | Warbaahinta Umada Soomaaliyeed	Sunday, April 23rd, 2017	Home
Xulka Qaranka Faransiiska oo Guul ka Gaarey R. Of Ireland iyo Germalka oo Si Sahlan ugu Soo Baxay Wareega 8da ee Euro 2016+Sawiro
Jun 26, 2016 - jawaab	Koobka Yurub ayaa wali soconaya waxaana iminka lamarayaa wareegii 2aad ee 16ka Kooxood waxaana hoyday wadamo badan kuwaasi oo ay kamid yihiin Switzerland Republic of Ireland Slovakia Croatia N. Ireland
Sidoo kale caawa waxaa Fooda is dari doona Hungry iyo Belgiem ka oo ku balansan Stadium Municipal .
France ayaa kamid ah wadamada ugu cad cad inay qaadaan koobkaan Yurub ee sanadkaan wadankooda lagu qabanayo waxaana maanta ay garaaceen Republic of Ireland.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si xamaasad leh waxaana bilowgii ciyaarta laga nixiyay Xulka qaranka France oo gool Rigoore ah la dhex dhigay Shabaqooda waxaana dhaliyay goolkaasi Robert Brady oo gabi ahaanba ka farxiyay Jamaahiirta R. Ireland.
Xulka France oo weerar badan ku qaaday shabaqa R.Ireland ayaa waxaa u suura gashay inay dhaliyaan laba gool oo deg deg ah waxaana labada gool u wada dhaliyay Xigida Altetico Madrid ee Antonio Grienzmann.
R.of Ireland oo qudhooda soo bandhigay Ciyaar wacneed ayaa waxaa kaarka cas ka qaatay Shane Duffy daqiiqada marka ay ahayd 66 qaybtii danbe ee ciyaarta waxaana arintaasi ay u sahashay Xulka Qaranka France inay kasoo Gudbaan Ireland .
Sidoo kale Xulka Jarmalka ayaa si sahlan ugu soo baxay wareega 8da ee Euro 2016 ka dib markii ay 3-0 ku xasuuqeen xulka Slovakia iyadoo weliba Mesut Ozil uu rigoore ka qasaariyay qeybtii hore ee ciyaarta. Xulka heysta Koobka Adduunka ayaa wareega 8da ku sugaya xulkii ka soo baxa Italy iyo Spain oo habeen danbe ciyaaraya.
Ciyaarta waxa ay ku bilaabatay si xamaasad leh iyadoo Jarmalka ay durbadiiba bilaabeen inay koontaroolaan kubada, fursadii ugu horeysay ee ciyaarta iyagana ayaana helay daqiiqadii 7aad markii laad xor ah uu soo qaaday Toni Kroos uu madaxeeyay Sami Khedira laakiin waxaa faraha foodooda ku bixiyay goolhaye Kozacik.
Daqiiqadii 8aad ayaa Koornadii ka dhalatay ay soo tuureen xulka Jarmalka ayaa waxaa iska soo bixisay Slovakia laakiin waxaa kubada banaanka xerada ganaaxa ku helay Jerome Boateng kaasoo darbo joog hoose oo gantaal ah ku tuuray goolka, waxa ay sii taabatay ciyaaryahan Slovakia ah ka hor inta aysan shabaqa ku nasanin, waxaana uu hogaanka u dhiibay xulka heysta Koobka Adduunka.
sidoo kale xulka Germalka waxaa labada gool oo kale u kala dhaliyay Mario Gomez iyo Julian Draxler waxaana goolashaasi ay gabi ahaanba quusiyeen Rajadii xulka qaranka Slovakia oo ka xir xirtay Koobka Euro 2016 ee France.